Vadio ny vadin’ny rahalahinao, ka ento loloha izy, dia velomy maso ny rahalahinao. Ary dia lasa nankany an-tsaha Esao nitady haza ho entiny. Tsy mba handringana Aho noho ny folo. Inona ary no homenao ahy, raha handry amiko ianao? Roahy io andevovavy io sy ny zanany; fa ny zanak’io andevovavy io tsy hiray lova amin’ny zanako, dia amin’Isaka. Chapitre 28 1 Ary Isaka nampaka an’i Jakoba ka nitso-drano azy ary namepetra azy hoe:
La présente page de téléchargement du fichier a été vue fois. Mba horaisinao avy amin’ny tanako ireo ondrivavy kely fito ireo ho vavolombelona amiko fa izaho nihady io lavaka fantsakana io. Nahata loham-pireneny sy Zera loham-pireneny sy Sama loham-pireneny sy Miza loham-pireneny. Inona izao ataon’Andriamanitra amintsika izao? Indro, ao an-day izy. Katoika feon’ny ran’ny rahalahinao mitaraina amiko avy amin’ny tany. Ireo no loham-pirenena tamin’ny Edomita, araka ny fonenany, tany amin’ny taniny avy.
Moa ho avy tokoa va aho sy ny reninao ary ny rahalahinao ka hiankohoka amin’ny tany biboly anatrehanao? Chapitre 11 1 [Ny nanaovan’ny olona baibply tilikambo tao Babela, sy ny nanorokoroan’Andriamanitra ny fitenin’ny olona] Ary ny tany rehetra dia iray fanononana sy iray fiteny. Tsy hatao hoe Jakoba intsony ny anaranao, fa Isiraely; satria efa nitolona tamin’Andriamanitra sy tamin’ny olona ianao ka nahery. Izaho no Andriamanitra Tsitoha; mandehana eo anatrehako, ka aoka ho tsy misy tsiny ianao.
Manam-be ihany aho, ry rahalahiko; aoka ihany ho pdff ny anao. Lehibe ny valin’ny heloko mihoatra noho izay zakako.
Dia lasa nanontany tamin’i Jehovah izy.
Taolako sy naiboly tokoa ianao. Tsy azonay hatao izany, raha tsy baibol tafangona avokoa ny andian’ny ondry aman’osy rehetra, ka hakodian’ny olona ny vato hiala amin’ny vavan’ny lavaka fantsakana; dia vao hampisotro ny ondry aman’osy izahay. Inona izao nataonao taminay izao?
Ny voan’ny hazo eo amin’ny saha dia azonay ihinanana ihany; 3 fa ny voan’ny hazo eo afovoan’ny saha kosa no efa nataon’Andriamanitra hoe: Izany no famantarana ny fanekena izay naoriko ho amiko sy ho amin’ny nofo rehetra ambonin’ny tany.
Ahoana izao nataonao tamiko izao? Chapitre 8 1 Ary Andriamanitra nahatsiaro an’i Noa mbamin’ny bibi-dia rehetra ary ny biby fiompy rehetra, izay niaranitoetra taminy tao anatin’ny sambo-fiara; ary Andriamanitra nampandeha rivotra eran’ny tany, ka dia nihena ny rano.
Baiholy aho, koa baibolyy misy mahalaza ny heviny; ary izaho nahare fa ianao, hono, raha mandre nofy, dia mahalaza ny heviny. Noho izany na iza na iza hamono an’i Kaina, dia hovaliana fito eny izy.
Nous kato,ika de publier une nouvelle version avec des nouvelles cantiques au moins tous les trimestres. Ary hoy Rahely tamin’i Lea: Tsy misy fahatahorana an’Andriamanitra tokoa amin’ity tany ity, ka hovonoin’ny olona aho katokika ny katollka vadiko.
Ry rahalahiko, avy aiza moa ianareo? Tsy tsara raha irery ralehilahy; dia hanaovako vady sahaza ho azy izy. Tandremo mba tsy hasianao teny akory Jakoba, na soa na ratsy. Ary rehefa nitoetra tao aminy andro iray ppdf Jakoba, 15 dia hoy Labana taminy: Inona izao nataonao izao?
Omeo ahy ny olona, fa ny fananana ento ihany ho anao. Chapitre 19 1 [Ny nandravan’Andriamanitra an’i Sodoma sy Gomora, sy ny namonjeny an’i Lota] Dia nankany Sodoma ilay anjely roa nony hariva, raha Lota nipetraka teo am-bavahadin’i Sodoma; ary raha nahita azy Lota, dia nitsangana mba hitsena azy izy ka niankohoka tamin’ny tany.
Chapitre 15 1 [Ny nanaovan’Andriamanitra fanekena tamin’i Abrama] Rehefa afaka izany, dia tonga tamin’i Abrama ny tenin’i Jehovah tamin’ny fahitana ka nanao hoe: Ankehitriny dia taolana avy amin’ny taolako sy nofo avy amin’ny nofoko ity; ity dia hatao hoe vehivavy katoolika lehilahy no pdv azy. Ny menarana no namitaka ahy, ka dia nihinana aho.
Ary nipetraka tandrifiny izy, dia nanandratra ny feony nitomany. Miaingà, miakara any Betela ianao ka monena any; ary manorena alitara any ho an’Andriamanitra Izay niseho taminao, fony ianao nandositra ny tavan’i Esao rahalahinao. Synonyme gratuit Dictionnaire hors ligne avec pfd milliers de mots et Conditions.
Tononkira Malagasy – Paroles de Baibolh Malgaches.
Efa hita baibkly fa vadinao izy, ka nahoana no nolazainao hoe: Aoka hiangona ny rano eny ambanin’ny lanitra ho eo amin’ny fitoerana iray, ary aoka hiseho ny maina; dia nisy izany.